अर्थ « Janata Samachar
‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद गोकर्ण बिष्टले आगामी वर्षको बजेटमा ‘परम्परागत सप्तरंगी विशेषताको झलक’ आइरहेको बताउनु भएको छ । पूर्व मन्त्री बिष्टले प्रतिनिधिसभाको बजेटबारे सोमबारको
‘बजेट कोरोना नियन्त्रणमै केन्द्रित हुनुपर्छ’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अहिलेको बजेट पूर्ण रुपमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । कांग्रेस नेता बडुले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बजेटबारे छलफलमा बजेट तत्कालिन
‘पर्यटन लथालिङ्ग छ, स्वास्थ्य र कृषिको अवस्था के हुने हो ?’
काठमाडौं ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका छाया अर्थमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिनुभएको छ । सरकारले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७, ०७८ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश भएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा आइतबार प्रस्तुत गर्नुभएको हो । अर्थमन्त्री
नगरपालिकाको राहत : साताको २ दिन रोजगारी, तुुरुन्तै ज्याला
भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिकाले लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न खाद्यान्न राहतका लागि रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । नगरभित्र बसोबास गर्ने स्थानीय र अस्थायी बसोबास गर्नेहरुलाई नगरपालिकाले रोजगारी दिन
कामदारका लागि भित्रै आवास, लकडाउनमै खुले उद्योग
अनिल तिवारी बारा । लकडाउनका कारण बन्द रहेका पथलैया वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरका केही उद्योग संचाालनमा हुन थालेका छन् । सरकारको निर्णय अनुसार कोरना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न अपनाउनु पर्ने न्यूनतम पूर्वाधार
तोकियो गहुंँको मूल्य, क्वीन्टलको कति ?
रुपन्देही । तिलोत्तमा नगरपालिकाले गहुंँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । किसानले लागत अनुसारको लाभ प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरिरहँदा नगरपालिकाले गहुंको मूल्य तोकेको हो । नगरपालिकाले गहुँको न्यूनतम
लकडाउनको ४७ दिनपछि उत्पादन क्षेत्र सुचारु हुँदै
काठमाडौं । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको ४७ दिन नाघ्दै गर्दा मुलुकको उत्पादन क्षेत्र सुचारु हुन थालेको छ । चैत ११ गतेबाट जारी लकडाउन जेठ ५ गतेसम्म
व्यवसायीसँग सापटी मागेर गाउँपालिकाले बाँढ्यो भत्ता
दैलेख । गुराँस गाउँपालिकाले स्थानीय व्यवसायीसँग सापटी मागेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न देशमा लकडाउन जारी रहेको समयमा समस्यामा रहेका राउटेहरुलाई गाउँपालिकाले सामाजिक
सुरक्षा विधि अपनाएर अटोमोबाइल्स व्यवसाय सञ्चालन गर्न नाडाको अनुरोध
पैसा, चेक, कागजपत्र लगायतका लेनदेनमा अनिवार्य रुपमा पञ्जा र सेनेटाइजरको प्रयोग गर्ने ।
दिउँसै बत्ती बालेर विरोध
बेलबारी घटना : गला रेट्दै गरेको भिडियो खिच्ने र सञ्जालमा पोष्ट गर्नेलाई कारबाही हुने
रुकुम घटनाका दोषीलाई कारबाही नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी
रुकुम घटना : पोष्टमार्टम रिपोर्टमा पाँचै युवाको कुटपिटबाट मृत्यु भएको देखियो
हत्या गरेर फालेको युवकको शव भेटियो
तपाईको यो साता (जेठ १८ देखि २४ सम्मको राशिफल)